Baby Magic Calming Baby Lotion (Lavender & Chamomile) 266ml - Violet | Buy online | SHOP.COM.MM
Baby Magic Calming Baby Lotion (Lavender & Chamomile) 266ml - Violet
Kay Khine Myint
အရမ်းကို ကောင်းတဲ့lotion လေးပါ .
စေးကပ်မှု မရှိဘဲ အနံ့ လေးကလဲ မွေးမွေးလေးနဲ့ အရမ်းကိုအဆင်ပြေပါတယ်. Read more Hide
ကိုယ့်အကြိုက် Lavender ...
chemical ပါတဲ့ skin care တွေကိုကြိုက်လို့ ... Lavender ပန်းနံ့လေးနဲ့ Baby Magic Lotion ပဲလိမ်းတယ်။ Read more Hide
Aye Myat San
ကိုယ့်အသားအရေက sensitive ဖြစ်တော့ ကလေးသုံး baby magic lotion လေးနဲ့ကအဆင်ပြေသွားတယ် Read more Hide
အနံ့လေးကိုအရမ်းကြိုက်တယ်။ စေးကပ်မှုမရှိတာလဲ သဘောကျပါတယ်။ ကလေးတွေကိုလိမ်းပေးရင်းနဲ့ တခါတလေကိုယ်တိုင်လဲသုံးဖြစ်တယ်။ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ Read more Hide
Baby magic လိုးရှင်းက အနံ့လေးသင်းလို့ အိမ်ကတူမလေးအတွက် အမြဲဝယ်ဖြစ်ပါတယ်။ Read more Hide
သားလေးက allergic ဖြစ်တတ်လို့ အရမ်းဂရုစိုက်ရတယ်။ ခုတော့ Baby magic နဲ့မှအဆင်ပြေသွားတယ်။ Read more Hide
Made from Lavender and Chamomile extracts, the Baby Magic calming lotion is rich and creamy to leaveasoothing effect on your baby's skin. Giveatender massage to your baby before going to bed and watch them experience uninterrupted sleep all night. This product can be used safely during five years from manufacturing date.
Specifications of Calming Baby Lotion (Lavender & Chamomile) 266ml - Violet